Home News Cadeeyn:-Khilaafka Galmudug oo la ogaady in Villa Soomaaliya lagasoo Abaabulay!!
Cadeeyn:-Khilaafka Galmudug oo la ogaady in Villa Soomaaliya lagasoo Abaabulay!!
Khilaaf iyo mooshin waa ereyada uga miisaanka weeyn marka laga hadlaayo siyaasadda Soomaaliya Kuwaasi oo maqalkoodu noqday jooge aan marnaba maqneeyn oo aad moodo in Siyaasiintu ku han-qaadaan.
Magaalooyinka Dhuusa-mareeb iyo cadaado waxaa hadda ku kala sugan labo garab oo galmudug u kala jabtay kuwaasi oo kala ah,Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug Cali Gacal casir iyo Maxamed Xaashi Carabeey oo ah Madaxweyne Ku Xigeenka Galmudug oo Cadaado joogo iyo madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle xaaf,Shiikh Maxamed shaakir Cali Xassan oo ah Madaxda Xukumadda Galmudug iyo Gudoomiye Ku Xigeenka Baarlamaanka Maamulka Galmudug Xareed Cali Xareed iyana waxaa ay ku sugan yihiin Magalada Dhuusa-mareeb.
Dhinacyada is-haaya waxaa uu khilaafkoodu ka bilaawday dastuurka Maamulka Galmudug oo goortii la ansaxiyay durba uu dhaliilay Cali gacal casir,waxaana ka dib Sheekaddu Xumaatay markii Madaxweyne Xaaf iyo Gacal Khilaafkoodu banaanka Yimid.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukumadda Soomaaliya ayaa isku howshay soo fara-galinta Arrimaha Maamulka Galmudug taasi oo madaxweyne Xaaf ku tilmaamay gacan,wasiir sabriye oo arinkaan ka hadlay ayaa sheegay in uu u taag waayay xalinta Khilaafkaasi.
Siyaasiinta qaar ayaa waxaa ay qabaan in Khilaafka Curtay ee madaxda Maamulka Galmudug lagaso maleegay Villa Soomaaliya,kuwa kalana waxaa ay qabaan in hogaamiyaha maamulka galmudug in uu isku koobay awood maamul taasina ay sabab u tahay khilaafka Bilaawgiisa.
Wararka aan maanta heleeyno waxaa ay sheegayaan in Odayaasha Dhaqanka Maamulka Galmudug ay qaban qaabinayaan kulan ay ku doonayaan in lagu xaliyo Kilaafka Maamulka Galmudug,hase’yeeshee waxaana rajo buuran laga qabin in kullankaasi uu miri dhalaayo,maxaa yeelay Labada dhinac meelo kala fog ayeey kala joogaan.
Shir jaraa’id oo ay shalay qabteen Qeeybta Ku sugan Dhuusa-mareeb ayaa waxaa ay ku baaqeen in galmudug aan bohol lagu ridin islamarkaana wadahadal ay ogolaan Madaxweyne Ku Xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Madaxda Galmudug ayaa waxaa ay noqdeen Khilaaf ma hurto,aan kala harin,sababtoo ah dhowr jeer ayeey xildhibaanadda Maamulka Galmudug mooshin ka keeneen Madaxweynahii hore c/kariin xusseen Gulleed iyo Xaaf codkii la qaaday ee kalsooni kala laabashana ma jirin mid hirgashay oo la ogolaaday.
Sidaas oo ay tahay wali calaamad su’aal ayaa saaran aqbalida Hadii mooshin laga keeno xaaf islamarkaana xildhibaanadu qaadan Go’aan ah in la cirdeeyo,ileen horay ayeey u dhacday waana hirgali weeysaye.
ugu dambeeyn waqtigaan galmudug ma xamilo karto khilaaf siyaasadeed oo horleh,waxaana loo baahan yahay in dowladda iyo waxgaradku keenaan xal lagu badbaadinaayo Galmudugta Rajada leh.